के तपाईंको पनि निद्रा विथोलिएको छ ? | सुदुरपश्चिम खबर
इन्स्टिच्युट अफ ह्युमन बिहेवियर एन्ड एलाइड साइन्सका वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. ओम प्रकाश भन्छन् कि, निद्राको एक चक्र ९० मिनेटको हुन्छ । एक रातको निद्रामा हामी लगभग यस्तो ४–५ साइकल पुरा गर्छौ ।
‘९० मिनेटको साइकलमो पहिलो चरणलाई नन रेपिड आइ मुभमेन्ट स्लीप –एनआरइएम) भनिन्छ । आम बोलिचालीको भाषामा यसलाई गहिरो निद्रा भनिन्छ । दोस्रो चरणको तुलनामा यो लामो हुन्छ ।
दोस्रो चरणलाई र्यापिड आई मुभमेन्ट स्लीप –आरइएम) भनिन्छ । यही चरणमा हामी धेरैजसो सपना देख्छौं । अक्सर यस समयको निद्रा हामीलाई याद हुन्छ ।
विभिन्न किसिमको त्रास, भ्रम, अनिश्चितासँग जुध्नुपर्यो । यी सबैको असर निद्रामा पनि प¥यो । (अनलाइनखबर बाट सभार)